Tamarta Casriga ah
Shahaadooyin & Sharaf
Mitirka Caadiga ah
Wajiga Labaad ee BS
DIN Rail Marxaladda Hal Mar
BS Saddex Waji
Meterka lacag bixinta
C & I Meter
Kaabayaasha Miisaanka Sare (AMI)
N + Xalka
Horumarinta & Maalgelinta Mashruuca
N + Xal-dhan-hal Xal
Xalka Maareynta Waxtarka Tamarta
Xalka AMI ee Laos
Qiimeynta Qiimeynta Wax ku oolka ah ee Bariga Dhexe
Geedaha Linyang PV ee Shiinaha
Mashruuca Adeegga Tamarta Isku-dhafan ee Wadada Zhangshi
Saldhigga Keypad Smart Saddex Wajiile Meter Hore Loo Siiyey LY-SM350
Smart Three Phase Indirect Meter (CTVT Operated) LY -...
Smart Saddex Waji Meter aan toos ahayn (CT shaqeeya) LY-SM ...
DIN-Rail Smart Mashiinka Marxaladda Hal-Bixiyaha LY-SM120
Smart Keypad Mashiinka Halbeegga Ah ee Lays-SM150
Halbeegga Halbeegga Halbeegga caadiga ah
LY-BM11 mitir waa mitirro halbeeg ah oo qiimo-ku-ool ah, oo lagu dabakhi karo macaamiisha deggan iyo mashaariicda mitir-hoosaadka. Way saxan yihiin oo sifiican ayaa loogu ilaaliyaa howlaha kahortaga faragalinta, oo ku haboon uruurinta dakhliga jaban iyo xalalka ilaalinta.
LY-BM11 mitir ayaa loogu talagalay iyada oo ku saleysan qaab dhismeed jilicsan oo bixiya fursado dhowr ah iyadoo la raacayo suuqa iyo macaamiisha shuruudaha.
Mitirka Kaadhka Lacagta La Siiyo ee Smart Card LY-SM150
LY-SM150 mitir horay loo sii siiyay ayaa ah kuwa sare ee AMI smart hal mitir koronto, oo leh BS isku-dhafan isku-dhafan / Nooca Kaadhka Smart iyo / ama kala-bixinta noocyada badhanka. Astaantooda gaarka ah ee qalabka is-gaarsiinta-iyo-ciyaar isugeynta waxay abuureysaa suurtagalnimada is-weydaarsiga iyo adeegsiga noocyo kala duwan oo isku-xiran fiilooyin iyo fiilooyin isku-kalsoon, oo ku habboon macaamiisha C & I ee deggan iyo kuwa yar.
LY-SM150 mitir taxane horay loo siiyay ayaa sax ku ah cabirka & kormeerka culeyska iyo xuduudaha shabakada iyo waliba howlaha kahortaga faragalinta, iyaga oo ka dhigaya kuwa ku haboon uruurinta dakhliga iyo xalalka ilaalinta. Waxaa loo qaabeeyey iyadoo lagu saleynayo 20-bit Token iyadoo la raacayo qeexitaannada STS ama CTS, oo si buuxda u hoggaansamaya DLMS / COSEM, heerarka IDIS oo lagu caddeeyey shahaadooyinka DLMS, MID, IDIS, STS, SABS si loo damaanad qaado isdhexgalkooda ka sarreeya barnaamijka AMI
C&I CT / PTCT Saddex waji CT / PTCT oo kuxiran Smart Energy Meter waa Meter heer sare ah oo heer sare ah si loo cabiro seddex waji AC firfircoon / falcelin leh inta jeer ee 50 / 60Hz. Waxay leedahay hawlo casri ah oo kala duwan si loo xaqiijiyo Cabbiraadda Smart & Maareynta tamarta, oo leh astaamo saxsan oo sarreeya, xasaasiyad aad u fiican, kalsooni wanaagsan, cabbiraad ballaaran, adeegsi hooseeya, qaab dhismeed adag iyo muuqaal qurxoon, iwm.
LINYANG SPLIT-NOOC KELIYA-TALO DIIN RAIL OO LAGU TAGAY QAABKA TAYADA QAADASHADA KHUDBADDA KEYPAD
Nooca Linyang Split-Single DIN Rail Railing Keypad Prepayment Energy Meter waa mitirka tamarta IEC ee caadiga ah ee loo adeegsado in lagu cabbiro hal waji tamarta firfircoon ee leh inta jeer ee 50 / 60Hz iyo howlaha horay u bixinta iyada oo loo marayo badhanka iyo TOKEN. Markay macaamiishu jecelyihiin inay iibsadaan koronto, barta iibintu waxay siin doontaa 20-bit TOKEN oo lagu kaydiyo macluumaadka khidmadda korantada. Macaamiisha ayaa geliya TOKEN mitirka ka soo socda kumbuyuutarka, ka dibna mitirku wuxuu go'aaminayaa TOKEN oo wuxuu ku dallacayaa mitirka. Kharashka TOKEN wuxuu ka kooban yahay 20 lambar. Borotokoolka wareejinta xogta waa cabasho leh heerka STS.
Smart Saddex Waji Meter LY-SM300
LY-SM300 mitir waa heer sare oo seddex weji koronto ah oo AMI smart ah, oo leh astaamo u gaar ah moodeelka wada xiriirka iyo furitaanka, abuurista suurtagalnimada isdhaafsiga iyo adeegsiga noocyo kaladuwan oo isugu jira fiilooyin & fiilooyin la isku halleyn karo, oo lagu dabaqi karo macaamiisha C & I ee degan iyo kuwa yar
LY-SM300 mitir waxay siisaa yutiilitiyada heer sare oo sax ah iyo isku halleyn lagu cabiro & kormeerka culeyska iyo xuduudaha isku xirka shabakada iyo waliba howlaha ka hortagga faragalinta, taasoo ka dhigeysa iyaga kuwa ku haboon aruurinta dakhliga iyo xalalka ilaalinta. Waxaa loogu talagalay inay si buuxda ugu hoggaansamaan heerarka DLMS / COSEM IEC waxaana lagu caddeeyay shahaadada DLMS.
Mitir Halbeegga Smart Halyeey-SM160
LY-SM160 mitir waa heer sare oo AMI smart hal mitir koronto ah, oo leh iskudhafan PLC iyo / ama iskuxirka isgaarsiinta fiilada-iyo-ciyaarta, oo lagu dabaqi karo macaamiisha C & I ee degan iyo kuwa yar.
LY-SM160 mitir ayaa siiya yutiilitiyada heer sare oo sax ah iyo isku halleyn lagu cabiro & kormeerka culeyska iyo xuduudaha shabakada iyo waliba howlaha ka hortagga faragalinta, taasoo ka dhigeysa aalado qiimo jaban ku haboon aruurinta dakhliga iyo xalalka ilaalinta. Waxaa loogu talagalay inay si buuxda ugu hoggaansamaan heerarka DLMS / COSEM iyo IDIS waxaana lagu caddeeyay shahaadooyinka DLMS iyo MID si loo damaanad qaado isdhexgalkooda ka sarreeya barnaamijka AMI.
Smart Three Phase Indirect Meter (CT Operated) LY-SM300CT
LY-SM300-CT waa heer sare oo aan toos ahayn oo seddex mitir koronto ah oo AMI ah oo sare u qaadaya tasiilaadka oo siiya yutiilitiyada saxnaanta sare ee fasalada 0.5s / 0.2s iyo kalsooni sarreysa, oo lagu dabaqi karo macaamiisha kala duwan ee C&I iyo waliba metering metering. Waxaa lagu soo bandhigayaa hawlo adag oo ay ka mid yihiin cabbiraadda & kormeerka culeyska iyo xuduudaha shabakadda ee ku saabsan danabyada kala duwan iyo heerarka hadda jira, kor u qaadista tayada awoodda la xoojiyay iyo sidoo kale cabbiraadda THD iwm, kuwaas oo awood u siiya hay'adaha iyo warshadaha gaarka loo leeyahay si sahal ah oo si sax ah loola socdo shabakadaha awoodooda.
Naqshadeynta qaabdhismeedka 'LY-SM300-CT' waxay bixisaa noocyo kala duwan oo la isku haleyn karo oo xarig ah & xiriirro isgaarsiin wireless ah. Waxay shahaado ka heleen MID, DLMS / COSEM iyo IDIS si ay u damaanad qaadaan mashiin cabir lagu kalsoonaan karo oo la wadaagi karo ee nidaamka AMI.
Smart Three Phase Indirect Meter (CTVT Operated) LY-SM300-CTVT
LY-SM300- CTVT waa heer sare oo aan toos ahayn oo seddex mitir koronto ah oo toos ah oo AMI ah oo siiya yutiilitida saxnaanta sare ee fasalada 0.5s / 0.2s iyo kalsooni sarreysa, oo lagu dabaqi karo macaamiisha kala duwan ee C&I iyo waliba metering metering. Waxaa lagu soo bandhigayaa hawlo adag oo ay ka mid yihiin cabbiraadda & kormeerka culeyska iyo xuduudaha shabakadda ee ku saabsan danabyada kala duwan iyo heerarka hadda jira, kor u qaadista tayada awoodda la xoojiyay iyo sidoo kale cabbiraadda THD iwm, kuwaas oo awood u siiya hay'adaha iyo warshadaha gaarka loo leeyahay si sahal ah oo si sax ah loola socdo shabakadaha awoodooda.
Naqshadeynta qaabdhismeedka 'LY-SM300- CTVT' waxay bixisaa noocyo kala duwan oo la isku haleyn karo oo xarig ah & isku xirnaan xiriir la'aan. Waxay shahaado ka heleen MID, DLMS / COSEM iyo IDIS si ay u damaanad qaadaan mashiin cabir lagu kalsoonaan karo oo la wadaagi karo ee nidaamka AMI.
LY-SM350 taxanaha lacag bixinta waa horumarsan AMI smart three phase premeter koronto, oo leh BS iskudhaf ah nooc nooca loo yaqaan 'Smart Card type' iyo / ama noocyada kala duwan ee furaha, waxaa lagu qaabeyn karaa qaabka horay loosiiyay ama kuwa ladiray. Astaantooda gaarka ah ee qalabka is-gaarsiinta-iyo-ciyaar isugeynta waxay abuureysaa suurtagalnimada is-weydaarsiga iyo adeegsiga noocyo kala duwan oo isku-xiran fiilooyin iyo fiilooyin isku-kalsoon, oo ku habboon macaamiisha C & I ee deggan iyo kuwa yar.
LY-SM350 mitir taxane horay loo siiyay ayaa sax ku ah cabirka & kormeerka culeyska iyo xuduudaha shabakada iyo waliba howlaha kahortaga faragalinta, iyaga oo ka dhigaya kuwa ku haboon ururinta dakhliga iyo xalalka ilaalinta. Waxaa loogu talagalay iyada oo ku saleysan 20-bit Token oo ku saleysan STS ama qeexitaannada CTS, oo si buuxda u hoggaansamaya DLMS / COSEM, heerarka IDIS oo lagu caddeeyey shahaadooyinka DLMS, MID, IDIS, STS, iyo SABS si loo damaanad qaado isdhexgalkooda ka sarreeya barnaamijka AMI.
Smart Saddex Waji Meter LY-SM360
LY-SM360 mitir waa heer sare oo seddex mitir koronto ah oo AMI smart ah, oo leh iskudhafan PLC iyo / ama iskuxirka isgaarsiinta fiilada-iyo-ciyaarta, oo lagu dabaqi karo macaamiisha C & I ee degan iyo kuwa yar
LY-SM360 mitir ayaa siiya yutiilitiyada heer sare oo sax ah iyo isku halleyn cabirka & kormeerka culeyska iyo xuduudaha shabakada iyo waliba howlaha kahortaga, taasoo ka dhigeysa aalado qiimo jaban ku haboon aruurinta dakhliga iyo xalalka ilaalinta. Waxaa loogu talagalay inay si buuxda ugu hoggaansamaan heerarka DLMS / COSEM iyo IDIS waxaana lagu caddeeyay DLMS, shahaadooyinka MID si loo damaanad qaado isdhexgalkooda ka sarreeya barnaamijka AMI.
Mitir Halbeegga Smart Halyeey-SM 150Postpaid
LY-SM150 mitirrada dambe ee la bixiyay ayaa ah mitirro hal-waji ah oo caqli-gal ah oo AMI ah, oo leh muuqaal gaar ah oo ku saabsan habka is-gaarsiinta iyo is-gaarsiinta, abuurista suurtagalnimada is-weydaarsiga iyo adeegsiga noocyo kala duwan oo fiilooyin isku xiran iyo fiilo-la'aana, oo ku habboon deegaanka iyo cabirka yar ee C&I macaamiisha.
LY-SM150 mitir bixinta dambe ayaa sax ku ah cabbirka & kormeerka culeyska iyo xuduudaha shabakada iyo waliba howlaha kahortaga, taasoo ka dhigeysa iyaga kuwa ku haboon aruurinta dakhliga iyo xalalka ilaalinta. Waxaa loogu talagalay inay si buuxda ugu hoggaansamaan heerarka DLMS / COSEM iyo IDIS waxaana lagu caddeeyay shahaadooyinka DLMS, MID, IDIS si loo damaanad qaado isdhexgalkooda ka sarreeya barnaamijka AMI.
Smart Three Phase Meter LY-SM 350Postpaid
LY-SM350 mitir bixinta dambe waa AMI seddex mitir oo waji ah, oo leh astaamo gaar ah oo ku saabsan habka wada xiriirka iyo furitaanka, abuurista suurtagalnimada isdhaafsiga iyo adeegsiga noocyada isku xirnaanta fiilooyinka & fiilooyinka la isku halleyn karo, ee ku habboon macaamiisha C & I ee deggan iyo kuwa yar
LY-SM350 mitir taxane ah oo la bixiyay kadib waa sax marka la cabirayo & kormeerka culeyska iyo xuduudaha shabakada iyo waliba howlaha kahortaga faragalinta, taasoo ka dhigeysa iyaga kuwa ku haboon aruurinta dakhliga iyo xalalka ilaalinta. Waxaa loogu talagalay inay si buuxda ugu hoggaansamaan heerarka DLMS / COSEM iyo IDIS waxaana lagu caddeeyay shahaadooyinka DLMS, MID, IDIS si loo damaanad qaado isdhexgalkooda ka sarreeya barnaamijka AMI.
ku saabsan anaga
Warshad: No. 666 Linyang Road, Qidong, Gobolka Jiangsu 226299, Shiinaha
Xarunta dhexe: 18F, dhismaha 1, Zhengda Wudaokou Plaza, No. 1199 Minsheng Road, Pudong New Area, shanghai 200135, China
Wixii Faahfaahin Dheeraad ah
Haddii aad rabto inaad hesho macluumaadkii ugu dambeeyay, fadlan buuxi foomka hoose.
Fadlan buuxi aagga loo baahan yahay.
xarig (48) "/www/wwwroot/global.linyang.com/wp-content/cache"